Monday 9th July 2018 11:40:06 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Hargeysa
መደመር waa falsafada uu Dr Abiy Ahmed uu rabbo inuu Geeska Africa ku hogaamiyo. Ereyga macnihiisu marka Afsoomaali loo rogo waa "isugayn". Haddaba muxuu Dr
Abiy ereygan uga dan leeyahay? Dr Abiy wuxuu isla helay labada fursadeed ee kala ah inuu kasoo jeedo qoomiyadda Oromada oo ah qoomiyadda Itoobiya ugu weyn iyo dalkii mandaqada Geeska Afrika ugu weynaa.
Ilaa hadda falsafadda "isugaynta" ee Dr Abiy ayaad moodaa inay midho dhalayso. Siyaasadiisa arimaha gudaha ayaa si xawliya umidho dhashay oo waxaan odhan karaa marka laga reebo isku dhacyo qabiil oo dhawra oo markiiba ladejiyay mooyee wuu ku guulaystay inuu dalka ka hirgeliyo qorshayaashiisa kala duduwan.
Si kastaba ha ahaatee waxay u muuqataa in Dr Abiy ay guuluhu si isdabajoogu ugu soo xaroonayaan. Taasina waxay sii siinaynaa kalsooni dheeraada oo uu kusii xoojiyo falsafadiisa "isugaynta".
Markaa bulshooyinka Soomaaliyeed maxaa la gudboon? Bulshooyinka Somaliyed waxa la gudboon inay degdeg waxisaga weydiiyaan wixii kaga aadan falsafada "isugaynta". Haddii xukuumadaha Soomaaliyeed ee kala duduwani oo uu oday uyahay ruug cadaaga Ismaaciil Cumar Geele ay degdeg qorshe midaysan uga yeelan waayaan sidii falsafadan loo waajihi lahaa waxa dhici karta in bulshooyinka Soomaaliyeed uu daadku qaado oo ay maalinba midi tiraahdo "Dr Abiyow ma ogtahay inaanu Oromo walaalo nahay oo aanu kasoo jeedno beel hebel, markaa walaalaynu nahaye sidaa nagu ogow oo noo sad buri".
[Akhriso:—] Madaxweyne Biixi Oo Maalinta Beri Ah Itoobiya Ka Degaya Iyo Abiy Ahmed Oo Casuumad Usoo Diray
"Madaxweyne Muuse Biixi Madaxweynayaashii Ka Horeeyay Calaacal Loogama Baran" Xisbiga Waddani Oo Hogaaminta Bi
BBC-Soomaali: Maxaa Mudan In La Baahiyo? W/Q: Cali Cabdi Coomay